Vaovao - Miakatra hatrany ny vidin'ny vidin'ny vy.
Grille amin'ny sehatra
358 Fiadiana amin'ny halatra
Miakatra hatrany ny vidin'ny vidin'ny vy.
Hatramin'ny fiandohan'ity taona ity, ny akora manta toy ny hazo, spaonjy, akora firakotra simika, metaly tsy ferrous, ary na ny baoritra aza dia nisondrotra, ary nitombo avo roa heny aza ny vidin'ny sokajy sasany. Ohatra, ny metaly tsy ferrous dia nisondrotra manodidina ny 50%, ary ny poly-ether foam foam malefaka, akora ilaina amin'ny foam-spaonjy dia nitombo 126,74% tao anatin'ny efa-bolana lasa.
Ao amin'ny Focus, ny vidin'ny akora vy dia tsy nitsahatra nanomboka ny Jan, 2021. Amin'izao fotoana izao, aorian'ny Fetiben'ny Lohataona, dia mbola eo amin'ny firoboroboan'ny fitomboana.
Ireo antony lehibe indrindra dia ny fikororohana:
● Ny famoahana vy tamin'ny taona 2020 dia ambany noho ny vokatra tamin'ny taona 2019
● Minisiteran'ny tontolo iainana sy tontolo iainana: mampiroborobo ny vy sy vy, arintany ary indostria hafa hamahana ny fahaiza-manao tafahoatra
● Mbola hitohy ny tsenan'ny indostrian'ny milina ary hanatsara hatrany ny tontolon'ny asa.
Ny fanadihadiana dia mino fa ny fiakaran'ny vidin'ny akora dia etsy an-danin'izany tratry ny valanaretina pnemonia satroboninahitra vaovao manerantany, ary etsy an-danin'izany dia ny katalenta andrasana amin'ny fanarenana ara-toekarena manerantany aorian'ny fandefasana vaksinin'ny satroboninahitra vaovao amin'ny ho avy. Ho setrin'ny fiakaran'ny vidin'ny vidin-javatra dia nanambara ny fiakaran'ny vidim-bary ny fitaovana ao an-trano sy ny orinasa hafa.
Ny tsena vy dia niditra tamin'ny fanitsiana dingana. Vinavinainay fa ny fijerin'ny tsena dia mbola hanana ny fiakarana avo lenta ary hamboarina kely atsy ho atsy, miandry ny fanombohana ny tena fangatahana.
Ny renivohitra ara-bola dia manangona akora manta ary manombatombana amin'ny entam-barotra amin'ny tsena ho avy no anton'ny fiakaran'ny vidin'ny entam-barotra tato ho ato. Ity fironana ity dia hitohy mandritra ny roa taona farafahakeliny, ary hitombo ny tsindry amin'ny fihenan-danja RMB. Ny toekarena manerantany dia tsy tafarina amin'ny tontolon'ny fangatahana kamo amin'ny toekarena tena izy.
Fotoana fandefasana: Mar-03-2021
Inona no tokony hataoko aorian'ny vaksiny feno ...
Fetiben'ny lanternaly faly!
Grating vy, FRP Grating, vy nohosorana F ...
Adiresy: Tranobe A1608 Chuangxin, 315 Changjiang Avenue, Zone teknolojia avo lenta, Shijiazhuang, Faritanin'i Hebei. Shina